Category: लेख / रचना
अस्पतालमा निको हुन जाने कि बिरामी हुन?
December 7, 2020 December 7, 2020 Subas B.K0
के स्वास्थ्य हुन बिरामी हुँदा औषधी खाएर सुई लगाएर वा अस्पताल धाएर मात्र हुन्छ? दैनिक जीवनमा सामान्य सरसफाईका नियम पालन गर्नुपदैन र? हुन त यहाँ सयौं बेथिति, लापरवाही र ग्रैहजिम्मेवारीपना छ । साथै सुधार, इमान्दारिता र समाजमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दशकौ देखि यसले खेल्दै आएको भुमिकालाई कहिल्यै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आजको यो लेख प्रशासन तथा […]
सम्पादकीय परिवारको सबै सदस्य गुमाएको मान्छेलाई के राहतले मल्हम लगाउन सक्छ र? यो प्रश्न सरोकारवालाहरु र जनचेतनाको लागि रहेको छ । बिहिबार स्याङजा वालिङ नगरपालिका–१४ तमादीमा आएको पहिरोले एकै परिवारका ९ जनालाई घरभित्रै थुन्यो । पहिरोबाट बाँचेर अस्पतालमा छट्पटाइरहेकी मनिषा नेपालीको आवाज अझै पनि कानमा गुन्जिन्छ, उनले भनेकी थिइन अरु ठाउँमा वाल लगाईयो हाम्रोमा लगाइएन, […]
September 11, 2020 Subas B.K0
सुन्दा कथा जस्तै लाग्छ उहिले हिटलरको अत्याचारी अनेकौं युद्धले छिन्नभिन्न भएको भुमिमा कहिले भुकम्प विध्वंसकारी त कहिले अनेकौं महामारी अनि प्राकृतिक विपद बाढी पहिरोले तहसनहस पारेको छ मुटु जेहोस, कसैगरी चैन छैन मनमा । मर्दै छ पृथ्वी रोग,भोक र शोकले आतंकित छ संसार आशुमा डुबेको छ गाउँ अनि सहर थपिदैछ, लासहरुको चाङमाथी भन्कने झिंगा अनि […]
August 7, 2020 August 7, 2020 Subas B.K0
केहि दिन अगाडी एकजना दिदीले “भाई मेरो फेसबुक आइडि त ह्याक भएछ । रातभरी हिन्दी भाषामा एकजना मान्छेले ब्ल्याकमेल गर्दै धम्काउँदै, तथानाम गाली गर्दै पैसा पो माग्छ” भन्नुभयो । उसले मेरो आइडी र पासवर्ड पाएर मेरो पासवर्ड नै परिवर्तन गरेछ भनेर बताउनुभयो । हामीले आइडि पासवर्ड कसरी त्यो व्यक्तिसम्म पुगेछ भनेर पत्ता लगाउन खोज्दा दिदीको […]
May 15, 2020 May 15, 2020 Subas B.K0
तिमी र म नि पिरती लगाइ बसाउँला सुन्दर घर!प्रार्थना साथ प्रभुमा आई बसाउँला सुन्दर घर!! हिंडौला सङ्गै प्रभुको बाटो …..उकाली ओराली ,ख्रीष्टकै माया छातिमा सजाइ बसाउँला सुन्दर घर उद्दार मुक्ती, अनन्त जीवन , शान्ती र आनन्द,..स्वर्गीय आशिष तिमी र मलाइ बसाउँला सुन्दर घर गरौंला सङ्गै, लेक र बेँसि, घाँसदाउरा मेलापात,मान्द्रोको बार छ्वालिले छाई बसाउँला सुन्दर घर […]
कोरोना भाइरसः कोभिड-१९ बारेका झूटमा किन विश्वास गर्छन् मानिसहरू?
April 28, 2020 April 28, 2020 Subas B.K0
बिबिसी । कुनै पनि स्वास्थ्य सङ्कटका बेला गलत सूचनाको महामारी पनि उत्पन्न हुनु एउटा दुखद सत्य हो। सन् १९८०, १९९० र २००० ताका एड्सबारे हामीले यस्तै खतरनाक झूट फैलाइएको देख्यौँ। त्यसबेला एचआईभी भाइरस सरकारी प्रयोगशालामा बनाइएको थियो भन्नेदेखि त्यसको परीक्षण विश्वसनीय छैन भन्नेसम्मका गलत जानकारी फैलाइएको थियो। एउटा भ्रामक र निराधार सूचनामा त बाख्राको दूधले […]
कथा : खुसी रहने रहस्य
January 16, 2020 January 16, 2020 Subas B.K0
धेरै वर्ष पहिले एकजना मानिस परमेश्वरसँग स्वर्ग र नर्क कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने कुरा पर्कट गर्दछ । परमेश्वरले उसलाई स्वर्ग र नर्कको यात्रामा लैजानुहुन्छ । धेरै लामो यात्रा तय गरेपछि त्यो मानिस स्वर्ग र नर्क जाने बाटोको बिचमा पुग्दछ । परमेश्वरले त्यो मानिसलाई पहिले नर्कतर्फ लैजानुहुन्छ । त्यो मानिस जादाजादैँ एउटा ठुलो ढोकासामु पुग्दछ । […]
कहिले काही उसको अनुहार झली झली याद आउछ । उ संग बिताएका समयहरु, उ संग बिताएका पलहरु, उसंगका कुराहरु कहिलेकाही मनस्पटलमा धक्का दिन आइपुग्छन । कहिलेकाही झसंग हुन्छु, आँफैसंग झस्किन्छु र एकै छिनमा आफुलाई सम्हाल्छु र आँफैलाई भन्ने गर्छु, “मरेका आत्माहरुको सम्झना किन घरी घरी आइरहन्छन ?” आमाले चिया लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो । म जाराक […]
बाइबलमा कविताको स्थान
January 21, 2019 Subas B.K0
बाइबल पुस्तकहरुको एउटा वृहत संग्रह हो । जसमा साना ठूला गरी जम्मा ६६ वटा पुस्तकहरु अटाएका छन । आम मानिसहरुले बाइबललाई एक साधारण धर्मशाष्त्रको रुपमा मात्रै बुझ्दै आइरहेता पनि यस भित्र साहित्य, इतिहास, राजनिती, भुगोल, संस्कृति, कानुन, विज्ञान जस्ता यावत विषयहरुले पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको पाईन्छ तथापी बाइबल भित्र सबैभन्दा बढी साहित्यको एक प्राचिन तथा […]
नयाँ वर्षको सङ्कल्प र त्यसमा लागिपरिरहने उपायहरू
January 1, 2019 Subas B.K0
बिबिसी । आज सन् २०१९ को पहिलो दिन । आजदेखि नयाँ वर्ष शुरु भयो । र हामी धेरैले नयाँ वर्षमा यो गर्छु, उ गर्छु भनेर सङ्कल्प लिने दिन । नयाँ लक्ष र आफूमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्नेबारे सङ्कल्प गरेर नयाँ शुरुवात गर्ने दिन । त्यो आफू स्वस्थ्य बन्ने भन्ने वा पैसा बचाउने भन्नेबारे हुनसक्छ । […]
नयाँ वर्ष A.D को अर्थ
हामी नेपालीहरु वर्षमा २ वटा नयाँ वर्षको उत्सव मनाउनेहरुमा पर्दर्छौ । एउटा नयाँ वर्ष अर्थात वैशाख १ गते मनाईन्छ भने अर्को जनवरी १ तारिखको दिन । दुवैलाई हामीले ससम्मान मनाउने गर्दर्छौ तर हामी इसाईहरुले देशको सम्मान स्वरुप बैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षको रुपमा मनाउँछौ भने हामीले A.D किन महत्वपुर्ण छ भन्ने कुराको पनि जानकार भई […]
सफलताको एउटा बाटो
October 26, 2018 Subas B.K0
सफलता के हो ? सफलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु हाम्रो लागि सरोकारका विषय हुन । हामी यस्तै प्रश्नको उत्तरको खोजीमा विभिन्न पुस्तक, लेख तथा पत्रपत्रिका पढ्छौ । त्यति मात्र नभएर सफल भनिनेहरुको अन्तर्वार्ता तथा विचार पनि सुन्ने गर्दछौ । यद्यपि अझै हाम्रो चित्त बुझ्दैन । कसैले भन्छन संघर्ष नै सफलताको साँचो हो, […]